ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका अधिकाशं आयोजना समस्यामा, के गर्लान् वर्षमान पुनले ? | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतका अधिकाशं आयोजना समस्यामा, के गर्लान् वर्षमान पुनले ?
चैत ४, २०७४ | आजको अर्थ
काठमाडौँ । सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न हदैसम्मको जोडबल गर्ने बताएपनि काम गर्ने तरिका र प्रवृत्ति भने पूरानै अर्थात् परम्परागत रहेको छ ।
नवगठित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफू मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने घोषणा गरेको छ । तर प्रसारण लाइन निर्माणको अवस्था उस्तै रहेको छ । जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निजी क्षेत्रको जग्गा प्रयोग जस्ता समसया सबै आयोजनाको साझा समस्याको रुपमा रहेको छ । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जर्नादन शर्माले सुरु गरेका सकारात्मक तथा प्रभावकारी काम तथा कार्ययोजना समेत आझेलमा परेका छन् ।
निजी ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा उत्पादनको तयारी गरेपनि प्रसारण लाइनको अभावमा खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ । काबेली कोरिडोरको हालत सबैभन्दा बढी समस्यामा रहेको छ । १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी सम्पन्न गर्न आठ पटक समय थप गरिएको छ । चिनियाँ ठेकेदारको ज्यादतीका कारण सो आयोजना समस्याको घेरामा परेको छ ।
यस्तै नुवाकोटमा आयोजना स्थल रहेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए आयोजना कहिले सम्पन्न हुने हो कुनै ठेगान छैन । सो आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट रहेको छ ।
यस्तै पाँच प्रतिशत काम बाँकी रहेको ढल्केबर सवस्टेशन पुनः निर्माणको काम कहिले सुरु हुने हो केही पत्तो छैन ।
विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वर्षौंपिच्छे बदलिने मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन तथा आयोजना प्रमुखका कारण आयोजनाको लागत र समयसमेत बढ्दै गएको बताएर पन्छिने कर्मचारी प्रशासन पनि उस्तै अवस्थामा रहेको छ ।
सीमित साधन र स्रोत भए पनि नागरिकको महत्वकांक्षासमेत वृद्धि भएकाले राष्ट्रिय गौरव र महत्वका आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा रहेको छ । तर सरकारी संयन्त्रले नै काम नगर्दा समस्या घट्नुको साटो बल्झँदै गएको छ ।
मन्त्रालय मातहत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना रहेको छ । सो आयोजना आगामी वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रामा समेत कमी आउने सरकारी दावी छ । तर भारतीय ठेकेदार टेलम्याक्सले काम नगरी बसेको छ । सो सम्बन्धमा हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान जान सकेको छैन ।
तनहुँमा आयोजना स्थल रहेको तनहु सेती आयोजनाको ठेकेदार छनौट प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । अछाममा आयोजना स्थल रहेको बुढीगंगा आयोजनाको हालत उस्तै छ । सधै चर्चामा रहने तर काम नहुने आयोजनाको रुपमा पीश्चम सेती रहेको छ । चिनियाँ लगानीकर्ता थ्री गर्जेज आयोजनाबाट हात झिक्न चाहिरहेको छ तर नेपाली पक्ष किन सो आयोजनालाई अझै पनि अनुमतिपत्र दिएर राखिरहेका छन् ? बुझ्न सकिएको छैन । यो अवस्थामा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न आइपुगेका छन्, वर्षमान पुन ।
राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा थप समन्वय गर्ने दायित्वसमेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको काँधमा छ । चिनियाँ प्रवद्र्धक थ्री गर्जेजले जिम्मा लिएको सो आयोजना विगत सात वर्षदेखि गति लिन सकेको छैन । सिँचाइ आयोजनाका रुपमा रहेका रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टाजस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिने र समयमै सम्पन्न गर्ने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे ।
विगतमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयका रुपमा कार्यरत ऊर्जा, सिँचाइलाई वर्तमान सरकारले एकीकृत बनाएको छ । विगतमा सिँचाइ मन्त्रालयले हेर्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा, बबई र भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना रहेका छन् । चालू आवमा सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको आयोजनाको रुपमा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना मात्रै रहेको छ । अरु आयोजनाको प्रगति कागजम मात्रै रहेको छ ।
नवनियुत्तः मन्त्री पुनले नवगठित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका छन् लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आएका जनार्दन शर्माको विरासत सम्हाल्ने जिम्मामा आएका नेता पुनको आगामी दिन सहज देखिदैन । तर उनले विगतका सरकार र मन्त्रीले अगाडि सारेको सकारात्मक कार्ययोजनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । विगतमा धेरै राम्रा कार्ययोजना बनेका छन् । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण ती कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्, अब हामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने लक्ष्यका साथ आएकाले ती सबै काम गर्ने उनको भनाइ छ । तर विश्वास गरिहाल्ने आधार भने तथ्यहरुले दिएका छैनन् ।
दशैँको मुखमा बिजुली पुगेपछि गड्तीर क्षेत्र झिलिमिली
उर्जा असोज १७, २०७६
उर्जा बैशाख ६, २०७५
उर्जा असोज १६, २०७६
उत्तरी रसुवामा सुरु भयो १२० मेगावाट क्षमताको नयाँ विद्युत् आयोजना
उर्जा फागुन २, २०७५